ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ တူလေး နဲ့ အတူပျော်ပျော်ပါးပါး ဓာတ်ဖမ်းထားတဲ့ အေးမြတ်သူ – Let Pan Daily
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မမြတ်လေးလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောအေးမြတ်သူကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ဟန်ပန် အပြောအဆိုလေးတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ နေထိုင်ပုံလေးတွေကြောင့် အချစ်ပိုရတဲ့သူလေးပါ။ ဒါ့ပြင်သူမရဲ့ ကျော့ရှင်းလှတဲ့အလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပါးချိုင့်လေးဟာလည်း ပရိသတ်ရင်ကို ထိမှန်စေတာ အသေအချာပါပဲနော်။
အေးမြတ်သူဟာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိထားတဲ့သူလေးပါ။ သူမရဲ့ ကျစ်လျစ်လှပတဲ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းလေးဟာဆိုရင်လည်း ပုရိသတွေသာမက မိန်းကလေးချင်းပါကြွေရတဲ့သူလေးပါ။ အေးမြတ်သူဟာအခု လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့တူလေးနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးအချိန်ကုန်ဆုံးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အပျိုကြီးအေးမြတ်သူ တစ်ယောက်ကတော့ တူလေးကို အချစ်တွေပိုနေရင်းနဲ့ပဲ မိသားစုကို အချိန်ပေးပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့Facebookစာမျက်နှာမှာ “ဒီအပျိုကြီး…. အသဲတွေကိုချွေမယ့်သူလေး……… သူလေးအတွက်…. ရှင်သန်ရမယ်…သန်မာရမယ်” ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့ သူမရဲ့တူလေးနဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ….ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သူမရဲ့ တူလေး နဲ့ အတူပြျောပြျောပါးပါး ဓာတျဖမျးထားတဲ့ အေးမွတျသူ
ပရိသတျကွီးရေ.. မမွတျလေးလို့ အားလုံးက ခဈြစနိုး ချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောအေးမွတျသူကတော့ ခဈြစရာကောငျးပွီး ပှငျ့လငျးတဲ့ဟနျပနျ အပွောအဆိုလေးတှနေဲ့ ဟနျဆောငျမှုကငျးတဲ့ နထေိုငျပုံလေးတှကွေောငျ့ အခဈြပိုရတဲ့သူလေးပါ။ ဒါ့ပွငျသူမရဲ့ ကြော့ရှငျးလှတဲ့အလှတရားလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးဟာလညျး ပရိသတျရငျကို ထိမှနျစတော အသအေခြာပါပဲနျော။ အေးမွတျသူဟာ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျး သဘာဝကတြဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျရရှိထားတဲ့သူလေးပါ။ သူမရဲ့ ကဈြလဈြလှပတဲ့ ဘျောဒီကောကျကွောငျးလေးဟာဆိုရငျလညျး ပုရိသတှသောမက မိနျးကလေးခငျြးပါကွှရေတဲ့သူလေးပါ။ အေးမွတျသူဟာအခု လကျရှိမှာဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့တူလေးနဲ့အတူ ပြျောပြျောပါးပါးအခြိနျကုနျဆုံးနတောလညျး ဖွဈပါတယျနျော။
အပြိုကွီးအေးမွတျသူ တဈယောကျကတော့ တူလေးကို အခဈြတှပေိုနရေငျးနဲ့ပဲ မိသားစုကို အခြိနျပေးပြျောရှငျနတောဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးမီကလညျး သူမရဲ့Facebookစာမကျြနှာမှာ “ဒီအပြိုကွီး…. အသဲတှကေိုခြှမေယျ့သူလေး……… သူလေးအတှကျ…. ရှငျသနျရမယျ…သနျမာရမယျ” ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့ သူမရဲ့တူလေးနဲ့ ခဈြစရာပုံလေးတှကေိုတငျပေးလာပါတယျ။ ကဲ….ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
တောင့်တင်း ကျစ်လစ်တဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတွေ အထင်းစား ပေါ်လွင်လှပမေတဲ့ “မေပန်းချီ”
အမိုကျစား ဝတျစုံလေး နဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိကနေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး